गुल्मीमा पुरूषले पाँच दिनमा पाँच वटा सम्वन्ध बिच्छेद ! | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
गुल्मीमा पुरूषले पाँच दिनमा पाँच वटा सम्वन्ध बिच्छेद !
August 22, 2018 Nepal E News
प्रेम सुनार, गुल्मीमा पुरूषले पाँच दिनमा पाँच वटा सम्वन्ध बिच्छेद ! गुल्मी २०७५ भदौ ६ । मुलुकी संहिताले विशेष गरी सम्वन्ध विच्छेका क्रममा पुरुषहरुलाई धेरै मात्रमा राहत हुने देखिएको छ ।
मुलुकी (संहिता)ऐन लागु भएका ५ दिन भित्रमा गुल्मी जिल्ला अदालतमा फैसला भएको पाँच वटै मुद्दा एक सुका महिलालाई नदिलाई फैसला भएका छन । त्यस अदालतका श्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद बस्यालले भने–‘ संहिता लागु भएको पाँच दिनमा पाँच वटै सम्वन्ध विच्छेदको फैसाल विना पैसा भएका छन । ’
साउन मशान्तको मुख सम्म त्यसै जिल्लामा ५० लाखबाट वार्गेनिङ्ग हुने र २० लाख सम्म पुरुषलाई तिराएर डाढ् सेक्ने गरेका थिए अदालत बाहिरका अधिकारकर्मीहरुले ।
मेलमिलापका नाममा पुरुषलाई दवाव दिने र ठुलो रकम तिराउने क्रमको पहिलो चरण अर्थात संहिता लागु हुनुको एक हप्ता अघि मात्र एउटी महिलाले १० लाख नगद बुझेर सम्वन्ध विच्छेद मेलमिालवमा गराएकी थिईन ।
श्रीमान र घर परिवारको स्वीकृति विना विभिन्न शहरमा गएर बस्ने र लामो समय पछि फर्केर आई सम्वन्ध विच्छेदको मुद्दा दिने कतिपय महिलाहरुले अर्को लुकी विवाह गरेर समेत सम्वन्ध विच्छेद र गोजी भराईले पुरुषको ढाड सेक्ने गर्दै ।
ईस्मा २ का विष्णु कुँवर ७ वर्ष सम्म श्रीमती माईती मै बस्ने यता श्रीमानलाई न सम्वन्ध विच्छेद गर्न मान्ने न श्रीमानलाई अर्को विवाह गर्न दिने गरेर हैरान पारिन ।
धेरै पटक सञ्चारकर्मीहरु संग समेत आफ्नो पीडा सुनाए उनले ।
संहिता लागु भएको दिन देखि उनि जस्तै समस्यामा परेका थुप्रै पुरुषहरुले अब हामी सम्वन्ध बिच्छेद गर्न अदालत आउन हुन्छ ? भनेर सोध्न थालेका छन ।
श्रेस्तेदार वस्याल भन्छन आज त्यस्तै पुरुष आउने खवर देखिएको छ सम्भवता आजै हो भोली सम्म त्यो उनको मुद्दा दर्ता हुन सक्छ ।
संहिता लागु नहुनु सम्म कतिपय महिलाका लागि सम्वन्ध विच्छेद गतिलो अवसर बनेको थियो । विशेष गरी अनुशासित संगठन सेना, प्रहरीका मानिसहरु जागिर जाने डरले जति मागे पनि तिरेर जागिर जोगाउन बाध्य थिए ।
बैदेशिक राजगारीमा हुनेहरु थप पीडित बनेका थिए ।
घरमा आफ्नी श्रीमतिलाई परपुरुष गमनका वेला रंङ्गेहात भेटे पनि लाखौं तिरेर सम्वन्ध विच्छेद गराउने गरिएको थियो ।
अब त्यो बाध्यताबाट पुरुषहरु मुक्त भएका छन ।
भित्र भित्रै श्रीमतीको कुटाई सहेर बस्न बाध्य पुरुषले पनि अब त्यसरी श्रीमतीबाट असुरक्षित महशुस गरे सम्वन्ध विच्छेद माग्न सक्ने भएका छन ।
लोकतन्त्रलाई मागी खाने भाँडो बनाइन्न : प्रधानमन्त्री
समाजगुल्मीमा पुरूषले पाँच दिनमा पाँच वटा सम्वन्ध बिच्छेद !
गरीब, पछाडि परेका सबै जातजातिका लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क
गोदावरीको जंगलमा १३ वर्षीया बालिका बलात्कृत